सुबिधासम्पन्न अपार्टमेन्ट भन्दा कम छैन, सलमान खानको भ्यानिटी भ्यान:: Naya Nepal
सुबिधासम्पन्न अपार्टमेन्ट भन्दा कम छैन, सलमान खानको भ्यानिटी भ्यान
सेलिबेटीहरुले धेरै समय आफ्नो गाडीमा बिताउने गर्छन् । बिशेष गरी सुटिङमा भएको बेला आरामा गर्ने ठाउँ भनेकै गाडी हो जस्लाई सुबिधा सम्पन्न बनाएर भ्यानिटी भ्यान भनिएको हो ।
बलिउड सेलिबेटी भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा उनीहरुसँग भएको घर, आकर्षक गाडी, उनीहरुसँग भएको सम्पत्ति याद आउँछ होला हैन ? तर धेरै समय उनीहरु घर भन्दा सुटिङमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकोले उनीहरु भ्यानिटी भ्यान आकर्षक बनाउन चाहन्छन् । त्यहाँ उनीहरुको मिनी फ्लाट नै हुन्छ । ट्वाईलेट देखि लिएर रिल्याक्स रुम सम्म त्यही हुन्छ ।
आज केटीएम दैनिकले बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको भ्यानिटी भ्यानको तस्विरहरु देखाउने कोशिस गरेको छ ।
बिन्दास मूडमा सुष्मा !
अभिनेत्री सुष्मा कार्की पुनः एक पटक बिन्दास मुडमा झुल्किएकी छिन् ।
बिहिबार कुनै एउटा रिसोर्ट पुगेकी सुष्माले आफ्नो फेसबुक तथा इन्स्टास्टोरीमा थुप्रै वटा टिक टक बनाएर शेयर गरेकी छिन् भने स्विमिङ पूलमा खिचिएका आकर्षक तस्बिरहरु समेत पोस्ट गरेकी छिन् ।
तस्बिर तथा भिडियोमा अभिनेत्री कार्की निकै खुशी देखिएकी छिन् ।
यद्यपि, सुष्माले आफू कुन रिसोर्टमा रहेको भन्ने कुरालाई भने कतै पनि उल्लेख गरेकी छैनन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीसँग लड्नुपर्ने कांग्रेस पार्टीको यो हालत छ : रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूले समयमै झक्झक्याउँदा पनि नेतृत्वले महाधिवेशन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले १४ औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व छान्न आफू तयार रहेको र यसका लागि न्याय, निष्पक्षता र पारदर्र्शी मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।
बीपी जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेस प्रचार विभागले बुधवार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले आफूले भनेको समयमा महाधिवेशनको तयारी थालेको भए अहिले रुवावासी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नै नहुने बताए ।
‘हामी १४ औं महाधिवेशनको मुखमा छौं । कतिपय जिल्लामा समायोजन रोकिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण शुरू नै भएको छैन । मैले ३ वर्ष अगाडिदेखि महाधिवेशनको तालिकाको कुरा गरेको थिएँ । सुनौलो भविष्यका लागि समयबद्ध काम गर्नुपर्छ भनेको थिए । त्यसो गरेको भए रुवावासी गर्नुपर्ने थिएन,’ पौडेलले भने ।
विधानले १ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल थप गर्ने अधिकार नदिएको स्मरण गर्दै पौडेलले आफूले महाधिवेशको कुरा गर्दा नेतृत्वका लागि हतारो गर्‍यो भनेर व्यंग्य गरिएको स्मरण गरे । ‘जुन बेलामा सहज वातावरण थियो, असाधारण भनेर लम्ब्यायौं । अहिले साँच्चिकै असहज वातावरण हुँदा के भनेर टार्ने हो ? विधानले १ वर्षभन्दा माथि थप्ने अवस्था छैन,’ पौडेलले भने ।
पौडेलले सर्वसत्तावादउन्मुख कम्युनिस्टसँग लड्न बलियो पार्टी चाहिने बताए । ‘कम्युनिस्टको संगठित शक्तिसँग लड्न छ, यसै त उनीहरू धाँधली गर्न माहिर छन् । सत्ता र प्रहरी उनीहरूसँग आउँदो चुनावमा के के नगर्लान् ? त्यस्तो पार्टीसँग लड्नुपर्ने पार्टीको यो हालत छ,’ पौडेलले भने ।
पौडेलले कांग्रेसको महाधिवेशन ढिलाइले आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि तयारी नपुग्ने बताए । ‘महाधिवेशनभन्दा भन्दै स्थानीय चुनाव आउँछ । चुनावको सामना गर्न तयारी कहिले गर्ने ? देख्ने मान्छेले देख्दो रहेछ नि !’ पौडेलले भने ।
पौडेलले महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व छान्नका लागि आफू तयार रहेको बताए । त्यसअघि विमलेन्द्र निधिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी कार्यकर्ता र मतदातामा कम्युनिस्टसँग चुनाव लड्न ऊर्जा मिल्ने बताएका थिए ।
‘अहिले साथीहरू एकता भनिरहेका छन् । गिरिजाप्रसाद र किशुनजीको झगडा मिलाउन हामी लागेकै हो । हामीलाई आरएसएस (रामचन्द्र, शैलजा र शेरबहादुर) भन्थे । एकता चाहिन्छ, न्याय, निष्पक्षता र पारदर्र्शी मूल्यांकनको आधारमा एकता गर्दा मेल हुन्छ । त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ,’ पौडेलले अगाडि भने, ‘नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहन्छौं भने हामी तयारी गरौं । कहाँ गर्दा सहमति हुन सक्छ, १/१ तर्क अगाडि सारेर सर्वसम्मत गरौं । कसरी सर्वसम्मत गर्ने यथार्थ आधार पेश गरौं ।’
पौडेलले आजको यथार्थलाई हेरेर कहाँ न्याय र निष्पक्षता हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गरेर कांग्रेसलाई कम्युनिस्टसँग फेस गर्न सक्ने पार्टी बनाउन प्रस्ताव गरे ।